IMotorola Xoom, iNombolo yeModeli, amaXabiso amaXabiso kunye neHoneyComb SDK ukukhutshwa | I-Androidsis
El Ithebhulethi ye-Android ukuba sijonge phambili ekufikeleleni kwimarike ngokungathandabuzekiyo Motorola Xoom, isixhobo esiya kusibonisa izibonelelo ze Inguqulelo entsha ye-Android esiyaziyo kwi-HoneyComb ethi ke idityaniswe ngokudibeneyo nguGoogle kunye neMotorola.
Siyazazi iinkcukacha, iscreen se-10,1 esine-1280 × 800 isisombululo sepikseli, iprosesa yeNvidia Tegra 2 kwisantya se-1 ghz, i-1 Gb ye-RAM, ikhamera yangaphambili ye-5 Mpc kunye nekhamera engasemva eneflash kunye nomthamo wokurekhoda we-720p, ukuphuma kwe-HDMI HDMI, uqhagamshelo lwe-DLNA, iWifi , GPS, ikhampasi yedijithali, i-accelerometer, i-barometer, i-1080 Gb yokugcina kwangaphakathi kunye nokukhethwa kwe-32G. Akukho nto. Ewe, iMotorola iyazi ukuba zezona zibalaseleyo kwaye abayikunika.
1 Uluhlu lwamaxabiso e-Motorola Xoom kunye neemodeli
2 Ukusungulwa kweHoneyComb SDK
Uluhlu lwamaxabiso e-Motorola Xoom kunye neemodeli
Ngokutsho zakwicotte Abebencokola nabameli benkampani, iMotorola ithathela ingqalelo ithebhulethi yeXoom njengeprimiyamu kwaye ngenxa yoko ixabiso layo liya kuhambelana nalo mgangatho ubonelelweyo. Nangona kunjalo, bayaphawula ukuba ixabiso eliza kuthengiswa ngalo liyabaqinisekisa ukuba iyakuba yimpumelelo.
Ukuba sithatha njengexabiso elisezantsi leGlass Tab, enehardware esezantsi kakhulu kwaye ikhutshwe ngeenxa zonke ze- € 700 (kwifomathi yasimahla), ixabiso leXoom liya kunyuka. Okwangoku kukho amacwecwe ane Iprosesa yeNvidia Tegra 2 kunye nee-intshi ezili-10 ubukhulu ezijikeleze i- € 400 kwaye kukho amarhe okuba ithebhulethi eneHoneyComb kunye ne-LG izakuphuma ngexabiso elikufutshane ne-300 euros, siyibeka phi iXoom?
Ukongeza kwiinkcukacha ngexabiso kwincoko nomenzi waseMelika, kuyaqinisekiswa ukuba kuya kubakho iimodeli ezintathu zethebhulethi emarikeni, eyokuqala eya kuthi ifike kwimakethi yase-US kwisithathu sokuqala sonyaka, abanye bayabheja Ekupheleni kukaFebruwari, ukuba ayizukufumana uqhagamshelo lwe-3G kwaye iya kubandakanya kuphela uqhagamshelo lweWifi. Emva kwexesha, imodeli ebandakanya uqhagamshelo lwedatha ye-3G iya kuphehlelelwa kwaye ke siyakubona sibophelela iinkampani ezisebenza ngomnxeba kwaye kungekudala emva kwale modeli yamva nje yoqhagamshelo lwe3G iyakufika.
Ukusungulwa kweHoneyComb SDK
Iindaba azipheleli apha kwaye ukuba kutsha nje Sivile uMatías Duarte esithi i-HoneyComb ayisiyo inguqulelo ye-Android kuphela yeepilisi, Ngoku kuza iindaba eziphikisanayo ezivela kuGoogle uqobo. Kuthiwa ngoku I-Android 3.0 yinkqubo yamacwecwe Kodwa kamva sizakuzama ukudibanisa omabini amasebe e-android, i-Android yangoku 2.X ene-Android 3.X.
Le mbono yabekwa phambili kudala xa i-Android 2.0 ingekakhululwa, ngelo xesha kwakuthethwa ngento enokwenzeka yokwahlulahlula inkqubo yokusebenza ibe ngamasebe amabini, enye ye-Smartphone enye yeetafile, kubonakala ngathi amarhe ayilahlekiswanga kakhulu.
Okokugqibela kuthiwa I-HoneyComb SDK Iya kukhutshwa kwiiveki ezimbalwa kwaye inkqubo iya kuba kwindawo yokugcina esemthethweni kungekudala emva koko. Eli nqaku ndihlala ndisithi yenye yezona zibaluleke kakhulu xa kusungulwa ithebhulethi ngolu hlobo lwenkqubo yokusebenza. Nokuba unamandla kangakanani Motorola Xoom kunye nenguqulelo yeHoneyComb intle kakhulu kwaye iyamangalisa, ukuba akukho zicelo zilungiselelwe le nguqulo ye-Android ayizukunceda kwaye ngenxa yoko kubalulekile ukumilisela i-SDK ngokukhawuleza.
Siphela uJanuwari noFebruwari kuhamba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » IMotorola Xoom, iNombolo yeModeli, amaXabiso amaXabiso, kunye nokuKhutshwa kweHoneyComb SDK
Eyona nto isengqiqweni kukuba kukho amasebe amabini okanye amathathu e-Android, enye yeefowuni eziphathwayo, enye yeetafile kwaye enye yeTV ... Ndikufumanisa kunzima ukuba kwezi zixhobo zintathu banokwabelana nge-SDK 100%, ngaphezulu kwayo nantoni na kuba kumabonakude ujongano alunakuba luchukumiseka, kungoko sele sinamacandelo e-SDK angenakusetyenziswa ... Okwabo kukuba isixhobo ngasinye sine-SDK yaso, kuba ngale ndlela uyazi ngakumbi malunga nokusikelwa umda kwesixhobo ngasinye kwaye umzekelo awuzami ukwenza umdlalo weselfowuni ofuna ukusebenzisa yonke iminwe eli-10 ngokungathi unoku-odola kwithebhulethi ...
Ngokufanelekileyo, amanani ahlala ehamba kunye, kwaye akukho Android 3.0 yeetafile, kwiifowuni eziphathwayo yiya kwi-Android 4.0 nakwiiTelevishini ze-Android 2.2 ... Ngokufanelekileyo, inguqulelo nganye ye-Android yeyizixhobo ezintathu ngaxeshanye, nangona kungenxa yokuba uhlaziyo kuya kufuneka lube lonyaka, kuba ayifani nokuhlaziya i-SDK yeselfowuni kunokuba uyihlaziye iselfowuni, ithebhulethi kunye nomabonwakude ... nangona indinika oko ngethelevishini iyakuba nayo i-SDK yayo eneGoogle TV SDK ...
I-KITKAT ilungile kakhulu, ngaphezulu kokuba iTouch Touch sele ijikeleze ikona lixesha kwaye oko kuya kunceda iGreen Robotio yethu, ngoku kulungile ukuba isixhobo ngasinye sine-SDK kuba ayinguye wonke umntu oya kufuna ukuyiphuhlisa yeTV okanye yeetafile. , Ndicinga ukuba i-HoneyComb iyakuba nenombolo ye-Smartphone yayo enelinye igama okanye uguqulelo 2.4 ngaphambi kokungena kweyona IceCream okanye 3.0 kuzo zonke ii-smartphones oku kuya kuba yeyona nto ibalaseleyo kwi-3D kwaye ngenxa yezixhobo zeentsimbi ayizukubonwa 😉 yeyiphi eyona Google ekufuneka uyenzile ngoku kukudibanisa zonke ii-smartphones zika-2009 kunye no-2010 ukuya kuFroyo ngokuqinisekileyo abo bayayixhasayo, kwaye ke ngelo xesha ngeGingerBread, ngoku kwesi sihloko, ndiyathemba ukuba xa ubona enye yazo, yile nto funda kwaye hayi into ethi ekugqibeleni ibe ngama- $ 800 ukhetha ngcono i-iPad 2 ngexabiso eliphantsi kwaye ezinye njl.njl, ukuba nezinye iindlela akunakunceda i-Motorola / iGoogle kwimakethi ikhule kakhulu kwaye amathuba anele, ngokobuqu ndiyayithanda kwaye Iyandithathela ingqalelo, kodwa i-Motorola yenyeumenzi onganyanisekanga kuhlaziyo yingxaki efihlakeleyo kwaye uye waba yi-app eza ne-Android kwasekuqaleni.
Umdlali wokwenyani we-Android, i-beta entsha yomdlali wemultimedia
I-Kongregate Arcade, usetyenziso lweFlash yasimahla ye-Android